Aqoonta Ciise Masiix, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Dad badani waxay yaqaanaan magaca Ciise waxbadanna way ka ogaadaan noloshiisa. Waxay u dabaaldegaan dhalashadiisa oo ay u xusuusiyaan geeridiisa. Laakiin aqoonta wiilka Ilaah ayaa aad u qoto dheer. Waxyar ka hor dhimashadiisa, Ciise wuxuu u duceeyey xertiisa kuwaan aqoon u leh: “Laakiin kanu waa nolosha weligeed ah oo ay ku gartaan, adiga oo ah Ilaaha keliya ee runta ah, iyo kii aad soo dirtay, Ciise Masiix” (Yooxanaa 17,3).
Bawlos wuxuu qoray waxyaabaha soo socda ee ku saabsan aqoonta Masiixa: "Laakiin waxaan helay waxa aan ugu tiriyey inaan wax u dhinto xagga Masiix aawadiis, haddana, waxaan haatan wax walba ugu qaadaa wax ku saabsan aqoonta aad u badan oo ah Ciise Masiix, Sayidkayga, kaas aawadiis ayaan wax kasta luntay; oo waxaan ixtiraamayaa wasakhda si aan ugu guuleysto Masiixa " (Filiboy 3,7-8).
Bawlos, aqoonta Masiixa ayaa muhiim u ah, waxkastoo kale oo aan muhiim ahayn, wuxuu u arkayay waxkastoo kale inay yihiin qashin, sidii qashin la tuurayo. Aqoonta Masiixa miyuu muhiim inoogu yahay sida Bawlos oo kale? Sideen ku heli karnaa? Sidee isu muujiyaa?
Aqoontaani maahan wax ku jira fikirradeenna, waxay ku lug leedahay ka-qaybgal toos ah nolosha Masiixa, wada-noolaanshaha sii kordheya ee Ilaah iyo Wiilkiisa Ciise Masiix ah xagga Ruuxa Quduuska ah. Waxay noqotay mid lala yeelanayo Ilaah iyo Wiilkiisa. Eebbe nama siiyo aqoontan hal dhicis, laakiin wuxuu ina siinayaa gabal gabal. Wuxuu doonayaa inuu ku koraan nimco iyo aqoon. (2. Petr. 3,18).
Waxaa jira saddex meelood oo waayo-aragnimo na leh oo awood noo siisa inaynu kobcinno: wajiga Ciise, Erayga Eebbe, iyo adeegga iyo silica.
1. Ku koraan wejiga Ciise
Haddii aan rabno inaan si dhab ah wax u ogaano, ka dib markaa si dhow ayaan u eegnaa. Waan eegnaa oo baarnaa haddii aan gaarno gunaanad. Haddii aan rabno inaan qof baranno, waxaan eegnaa gaar ahaan wajiga. Waa isku Ciise. Waxaad ku arki kartaa badan oo isaga iyo Ilaah wejiga Ciise! Ogaanshaha wejigiisa Ciise ayaa ugu horreyn waa arrin qalbiyadeenna ku taal.
Bawlos wuxuu qoray "indhaha iftiinka wadnaha" (Efesos 1,18:2) yaa garan kara sawirkan. Waxa aan si xoogan u eegno sidoo kale saameyn ayey nagu yeelan doontaa, wixii aan ku eegno daacadnimo waxaan isu beddelaynaa. Laba jumlad oo kitaabiga ah ayaa tilmaamaya tan: “Maxaa yeelay, kan iftiinka ka soo bixiyey gudcurka, wuxuu weliba iftiimiyay qalbiyadeenna xagga iftiinka iyo aqoonta ammaanta Ilaah wejiga Ciise Masiix” (4,6 Korintos).
"Laakiin kulligeen waxaan muujin doonnaa ammaanta Rabbiga weji aan muuqan oo loo beddelay isla ekaanta, xagga ammaanta ilaa xagga ammaanta, kaas oo laga helo Ruuxa Rabbiga" (2 Korintos 3,18).
Waa indhaha wadnaha ee noo oggolaanaya inaan aragno wejigiisa Ciise xagga Ruuxa Ilaah oo aan u aragno wax ammaanta Ilaah ah. Sharaftaani waa mid ina tusaysa oo waxay isu bedeshaa muuqaalka wiilka.
Sida aan u raadineyno aqoonta wejigiisa Masiixa, waxaa loo beddelay muuqaalkiisa! "In Masiixu qalbiyadiinna ku noolaado rumaysad, sidaas darteed, asal ahaan iyo aasaas jacayl leh, waad ku garan kartaan quduusiinta oo dhan waxay yihiin ballaadhka, dhererka, dhererka iyo qoto dheerida, oo garta jacaylka Masiixa, laakiin si kastaba ha noqotee Aqoonta ayaa ka sarreysa inaad dhammaystirto doonista Ilaah. Haddaba aan hadda u leexano dhinaca labaad ee waayo-aragnimada kobcinta nimcada iyo aqoonta, Erayga Eebbe. Waxaan garan karno oo ku ogaan karno Masiixa, waxaan ku baranay eraygiisii ​​" (Efesos 3,17: 19).
2. Ilaah iyo Ciise waxay isu muujiyeen Kitaabka Quduuska ah.
«Sayidku naftiisuu iskula hadlaa eraygiisa. Ku alla kii eraygiisa qoraa waa aqbalaa. Isaga oo eraygiisu ku jiro, ayuu ku sii jiraa. Oo ku alla kii eraygiisa adkeeyaa, wuu ku sii jiraa isaga. Maanta, markay dadku raadinayaan aqoon ama ay raadsadaan bulsho, looma adkayn karo ku filan iyada oo aan shardi laga dhigin shuruudaha eraygiisa. Aqoonta caafimaad ee Masiixa waxay la xiriirtaa ereyada caafimaadka leh ee Rabbiga. Kuwaani kaliya waxay keenaan iimaan caafimaad leh. Taasi waa sababta uu Bawlos ku yidhi Timoteyos: «Sawirka si adag u qabo (Qaabka) ereyada caafimaadka leh » (2 Timoteyos 1:13). (Fritz Binde «Kaamilnimada Jidhka Masiixa» bogga 53)
Eebbe agtiisa, ereyadu maahan ereyo "kaliya", waa kuwo nool oo wax ku ool ah. Waxay yeeshaan awood aad u weyn waana isha nolosha. Ereyga Eebbe wuxuu doonayaa inuu naga fogeeyo xumaanta oo uu inaga nadiifiyo fikirradeenna iyo maskaxdeenna. Nadiifintani waa mid daallan, maskaxdeenna jirka waa in lagu ilaaliyaa qoryaha culus.
Aynu aqrino waxa Bawlos ka qoray waxa ku saabsan: Sababtoo ah hubka hubkeennu ma aha xagga bini-aadamka, laakiin wuxuu leeyahay awood xagga Ilaah ah oo lagu burburiyo qalcadaha, si aan sabab uga dhigno Burburinta (been-abuurka) iyo qabsashada meel kasta oo ka soo baxda aqoonta Ilaah iyo qabashada fikir kasta oo addeecidda Masiixa leh, waxay sidoo kale diyaar u tahay inay ka aargutaan caasinimo kasta oo addeeciddaadu dhammaysato. (2 Korintos 10,4: 6).
Addeecidani, ee Bawlos halkan kaga hadlayo, waa qayb muhiim ah oo nadiifinta. Nadiifinta iyo aqoontu gacanta ayay ku hayaan. Waxaan aqoonsan karnaa nijaasta marka la eego iftiinka wejiga Ciise waana inaan ka takhalusnaa: "Haddii ruuxa Eebbe ina tuso cillad ama wax aan Ilaah ku raacsaneyn, markaa waxaa naloogu yeeray ficil! Addeecid ayaa loo baahan yahay. Waxaa lagu gaadhay isbedelka ilaahnimada. Isbeddellada dhabta ah mooyee, wax walbaa waa fikir, aqoonta dhabta ah ee Masiixu ma qaan gaadho, way engejaysaa " (2 Korintos 7,1).
3. Ku koraan adeeg iyo dhibaato
Kaliya waa markaan eegno oo aan aragno adeeggii Ciise ee innaga iyo silica uu inoo qabo in silica aadanaha iyo u adeegidda dadka kale ay macno leeyihiin. Adeegga iyo silica ayaa ah ilo wanaagsan oo garanaya Masiixa, Wiilka Ilaah. Adeeggu waa gudbinta hadiyadaha la helay. Tani waa sida Ciise u adeego, oo wuxuu u gudbiya wixii uu ka helay Aabbaha. Sidaas waa inaan ku aragnaa wasaaraddeenna kaniisadda dhexdeeda. Adeeggu Ciise wuxuu sameeyaa waa annaga dhammaanteen.
Oo qaar wuxuu siiyey rasuullo, qaar nebiyo, qaarna wacdiyayaal, qaar adhijirro iyo macallimiin si ay quduusiinta ugu qalabeeyaan shuqulka adeegga, xagga dhisidda jidhka Masiixa, ilaa aan kulligeen ku wada mideysanno iimaanka iyo aqoonta. oo ah Wiilka Ilaah " (Efesos 4,11).
Adeegga wadajirka ah, waxaa nalooga dhigay meesha saxda ah iyo meesha saxda ah jirka Ciise. Laakiin isagu sida madaxa ayaa wax walba u tilmaama. Madaxa wuxuu hadiyado kala duwan u adeegsadaa kaniisada dhexdeeda si ay u soo saaraan midnimo iyo aqoon. Aqoonta Wiilka Ilaah ma aha oo keliya kobcinta shakhsiga, laakiin sidoo kale kobaca kooxda. Hawlaha kooxdu waa kala duwan yihiin, waxaana jira dhinac kale oo loogu adeegayo dadka kale oo u horseeda koritaanka aqoonta Masiixa. Halka adeeggu jiro silica.
Howlaha is-weydaarsiga noocaas ah waxay ku keenaan silica, shaqsi ahaan iyo kuwa kale iyo kuwa kale. Kuwa doonaya inay ka fogaadaan dhibaatadan seddexda ah waxaa shaki la’aan ah inay la kulmi doonaan khasaare xagga koritaanka ah. Waa inaan la kulannaa silica shaqsi ahaan, maxaa yeelay waa inaan luminaa nolosheena qaaliga ah markii iskutallaabta lagu qodbo, la dhinto oo lagu aaso Masiixa. Sidii qofkii ka soo kacaya uu ku sii noolaado dhexdeena, is-diidmadaani waxay noqoneysaa xaqiiq » (Fritz Binde "Kaamilnimada Jidhka Masiixa" bogga 63).
Laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad ogaato halganka weyn ee aan u leeyahay adiga iyo kuwa Laodicea jooga iyo kuwa aan aniga jidhka igu arkin oo dhan in qalbigooda lagu waaniyo, oo jacayl lagu mideeyo oo runti lagu hubo. xagga aqoonta qarsoodiga Ilaah, kaas oo ah Masiixa, oo ay ku qarsoon tahay dhammaan waxyaalaha qaaliga ah oo xigmadda iyo aqoonta ah. (Kolosay 2,1: 3).
waxaa qoray Hannes Zaugg